Umntu waseNorthsider - I-Airbnb
INorthsider yindlu yesitudiyo esine-quirky esisembindini wengingqi yaseMissoula's Northside. Irhabaxa encinci ngaphandle kodwa ithandeka ngaphakathi, iNorthsider ibonelela ngokuhlala okupholileyo, okucocekileyo, kunye nokutofotofo.
Kutshanje sithenge ikhaya elimnandi elidala eMissoula, MT, kwindawo esiyithandayo, eNorthside. Mninzi umsebenzi osele wenziwe ukuphucula ikhaya lethu elimnandi, elinye ligumbi elisanda kulungiswa le studio encanyathiselwe kwikhaya lethu. Siyibiza ngokuba yiNorthsider kuba njengendawo esihlala kuyo, igumbi lethu lincinci elinentliziyo yegolide. Ingaphakathi leNorthsider lihlaziywa ngokutsha ngokugqityezelwa okuhle okunje ngee-countertops zekhonkrithi kunye nemigangatho yokhuni oluqinileyo. Umphandle usengumsebenzi oqhubekayo, ofuna ukunyuswa kobuso obutsha, kunye nomsebenzi wokulungisa umhlaba. Sicinga ukuba isitudiyo sethu esincinci sinomtsalane, indawo yokuphumla efikelelekayo kwaye singathanda ukwabelana nawe ngayo. INorthsider inokwamkela abantu ababini ababelana ngebhedi yobukhulu bokumkanikazi. Ukongeza, kukho i-sofa yokukhupha enokuhlala umntwana okanye ababini. Isitudiyo sethu sixhotyiswe ngekhitshi encinci enefriji encinci, i-oveni encinci yetoaster, isinki encinci, iketile yeti yombane, izitya, i-french press, igrinder yekofu. Ikhitshi ayenzelwanga ukulungiselela ukutya kodwa ingasetyenziselwa ukulungiswa kwekofu, kunye nokugcinwa kokutya kunye nokufudumala kokutya okukhanyayo kwi-oven toaster. Igumbi lokuhlambela linesinki, indlu yangasese, kunye neshawari. INorthsider incanyathiselwe kuyo, yabelana ngodonga, nekhaya lethu esihlala kulo unyaka wonke. Sinekhaya elixakekileyo elinabantwana nabazali abakhutheleyo, yaye sisenokuba nomsindo ngamaxesha athile, kodwa senza konke okusemandleni ethu ukuba sizihlonele iindwendwe zethu.
4.67 out of 5 stars from 515 reviews
4.67 · Izimvo eziyi-515
Bonisa iingxelo zokuhlola eziyi515
Indawo yaseNorthside ye-eclectic likhaya lamagcisa, iintsapho, abenzi befilimu, ababhali, abasebenzi bekhola eluhlaza okwesibhakabhaka, abantwana beekholeji, abakhi bezakhiwo, iihippies kunye nabathandi begadi. Luhambo lwemizuzu eli-10 ukusuka edolophini, kunye nokukhwela ibhayisekile emfutshane ukuya kwiDyunivesithi yaseMontana. Ngaphakathi kobumelwane bethu kukho ibhaso eliphumelele ibhaso, iziko lobugcisa loLuntu elimangalisayo, kwaye ngexesha lasehlotyeni icinema yangaphandle.
Sihlala kwindawo kwaye siyafumaneka ukuze siphendule imibuzo malunga neevenkile zekofu, iivenkile zokutyela, iibhari, imingxuma yokuqubha, iindawo zokuhamba, nayo nayiphi na enye into onokuyidinga.